The Best Hoverboard Self vakadengezera sikuta 2017 - Jomo Technology Co., Ltd
Chikonzero kudana kuzvida BALANCInG sikuta se "Hoverboard" ndechokuti nepo akatasva, zvinoita sokunge uri dzinodzengerera anoverengeka masendimita pamusoro pasi. Yeuka kuramba kuonana pasi. Uyu rakanakisisa maviri-vhiri rwokuzvipira vakadengezera yemagetsi sikutawakagadzirira kupa nzira yakatsiga zvikuru ruzivo nokuda kwayo kuita. Vazhinji Scooters izvi zvingapfupikiswa mhosva zvakakodzera kubva bhokisi, izvo zvingaita kupa hachizi mutasvi itsva inenge hafu yeawa kuti anoshandisa akatasva kwokutanga pane rinofanira mhosva zvachose. The bhodhi ine mukuru kumhanya 12km paawa uye kuti kuyambuka zvikomo nyore uye neyemitenusirwa kuti mamwe mapuranga haagoni kubata. Usamborega kuzvisiyira plugged kuti arasikirwe usiku hwose uye kuramba zvakadzama vakarinda tembiricha kuti bhodhi rako apo zviri kuchaja. The guru kunyunyuta akanga achitaura nezvinetso kuchaja muitiro
Izvi akangwara kuzviremekedza BALANCInG sikuta , pachake akura transporter achiuya Makaralı (kana wako kudiwa), yamunenge kunakidzwa nemimhanzi okugumburisa pamusoro payo. It uyezve ane 500W Motors, simba simba kuita vakagadzirira uye zvavo kushandisa. Uyewo unogona nechokwadi kuti sikuta kwenyu kusarudzwa ane rakakura kukwanisa bhatiri. Nokuti uyu, unofanira kufunga nzira pakati akasiyana zvinoriumba kuti zvinosanganisira vakachengeteka, chiri pachena pano chaipo, mafambiro, zvatakakutadzirai ikozvino kare vakataura pamusoro, uye kufadza kurema kuti kutsigira pakati zvakasiyana zvinhu. Ndicho kuchikoshesa kunyange kana portability haisi zvikuru nyaya kwamuri somugumisiro zviri rizere zvokusarudza. It nzira imwe zana% rakasiyana anoziva zvaireva kupa iwe akanaka mabhiza unyanzvi. Vanogona kuva mukuru chinakidze mazera zhinji uye kupa rakasiyana nzira yokuwana kumativi.
Zvino ngatitarise kuiputsa ndorwangu, kuti kuwana zvakabikwa nhokwe pfungwa-kuvhuvhuta ichi. Uyewo, hazvizovi kutyora nyore kunyange zuva nezuva kushandiswa. It rakagadzirirwa wose pahwaro dzose kushandiswa serimwe rinogona kutsiva munhu tamba toyi vapfumi. Kudzidza kudzidza rwendo mumwe hoverboard inofanira zvimwe mafaro iwe pashure kudzidza nzira mudziyo mabasa uye nenzira zvakamisa hurongwa anosangana mumwe. Pose iwe Cruise zvinhu izvi muaizi ose Anodzivisawo kutora rwendo. Vatasvi aiva bvunzo nani tai zvikamu zvino uye zvakare. Nokudzora hoverboard ane duku vhiri yakatarwa zviri nyore uye vane mafungiro kupindura nokukurumidza zvisinei pamwe vakakura mavhiri zvinotora nguva kubudisa vakakwana achifambisa yenyu. Kufanana tiri kutaura nyanzvi nezvayakaipira dzose hoverboard muna chinyorwa ichi, zvakafanana chatingaita pamwe PowerBoard hoverboard. Asi panewo zvimwe zvakawanda zvinokosha kutora Kutarira. Sezvo zviri 2017, vanhu uchatorera Kutarira iwe uye kunzwa chinoshamisa ane musanganiswa godo. Ndicho zvikuru kusarudza nekuti isu KOOWHEEL kuva wakanakisisa hoverboards kubva kumusoro vagadziri kana kuita bhizimisi yakakwirira zvikuru hoverboard zvikamu mukugadzira makambani uye mutengo zvechokwadi, inokwanisika mutengo.
Post nguva: Sep-19-2017